पछाडि धकेलिदै छ- “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली”
ओजस्वी गौतम शुक्रबार​, माघ १० २०७६
मुलुकमा स्थिर सरकार आएपछि उद्योगी–व्यवसायीको सवै साना ठूला समस्या क्रमिक रुपले समाधान हुने भनिए पनि सो हुन सकेको छैन । २५ वर्षदेखि उद्यमीहरुलेउठाउँदै आएका आर्थिक मुद्दाहरु अझै उठाउनुपर्ने स्थिति लाजमर्दो छ । उद्योगी व्यवसायीले अझै लगानी अनुसारको प्रतिफल पाउन नसकिरहेको गुनासो एकातिर छ भने अर्कातिर तीन तहका सरकारले जारी गरेका ऐन, नियम, नीति, निर्देशन, कर, शुल्क, दस्तुर, विरोधाभाषपूर्ण भएकाले उल्टै समस्या निम्त्याउने गरेको दुःखेसो छ ।
यसै सन्दर्भमा, राजस्व वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्ने नाउँमा निजी क्षेत्रमाथि विभिन्न अन्यायपूर्ण अस्त्रको प्रहार भइरहेको गुनासो गंभिर रहेको छ । मुलुकलाई नयाँ दिशामा लैजान सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहज र सरल वातावरणको निर्माण गरी दिनुपर्नेमा थप अप्ठ्यारा र जटिलता लादि दिने रवैया सहज आर्थिक गतिविधि विरुद्ध रहेको छ । उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्दा अझै पनि सय भन्दा बढी ऐन, कानूनलगायत विभिन्न प्रावधानको परिपालना गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाले आर्थिक गतिशिलता नचाहेको प्रष्ट हुन्छ ।
सरकारी प्रतिवद्धता जति कागजमा सिमित हुन थालेपछि लगानी भएका उद्योगको लगानी स्थिर भई पूर्ण उत्पादन क्षमताको उपयोग गर्न सकिएको छैन । सिमेन्ट, स्टिल, छड, होटेल, दाना उद्योगजस्ता केही क्षेत्रमा मात्र लगानी केन्द्रित छ । कुन क्षेत्रमा कति लगानी छ ? अब कति लगानी गर्न सकिन्छ ? त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन । लगानीकर्तालाई पर्याप्त सूचना दिइँदैन । यस्तो अवस्थामा उत्पादित बस्तु घरेलु बजारमा बिक्री हुनु त कता हो कता उत्पादनको गुणस्तरियतामा पर्याप्त ध्यान दिन नसक्नाले त्यसको निकासीमा समेत असर परेको छ ।
विना कुनै योजना र कार्यक्रम सरकारको लगानी पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी छ । जहाँ सडक आवश्यक हुन्न, त्यहाँ सडक बनाइन्छ । जहाँ आवश्यक छ, त्यहाँ बन्दैन । ठूला परियोजना अर्ध अवस्थामै छाडिन्छ । प्रतिफलको अनुमान बीना गरिने सरकारी लगानीबाट न सरकार न निजीक्षेत्र कोही पनि लाभान्वित हुन नसकेको विडम्बनायुक्त अवस्था छ ।
निजी क्षेत्रले पनि उद्यम विकासको लागि सरकारी तहबाट सही सूचना पाउन सकेका छैनन । सूचनाको महत्व र यसको आर्थिक आधार पहिचान गर्न नसक्दाको मूल्य सरकार लगायत निजीक्षेत्रले बराबर चुकाउनु परेको छ । पर्याप्त सूचना र त्यसको सही विश्लेषण विना गरिने लगानीको खासै अर्थ हुँदैन । यसैको परिणाम प्रतिफल दिनै नसक्ने अवस्थाका क्षेत्रमा समेत बढी लगानी भइरहेको छ भने कुनै क्षेत्रबाट उद्यमी पलायन हुनुपर्ने अवस्था छ । अव्यस्थित लगानीलाई राज्यले व्यवस्थित गर्ने कुनै परिपाटीको विकाससम्म हुन सकेको छैन । उद्योग व्यवसायमा भएको लगानीको सामाजिक र आर्थिक प्रतिफल लिन सक्ने वातावरणको अभाव छ भन्दा पनि हुन्छ ।
हाल आएर उद्योग वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन कानूनमा उल्लेखित स–साना त्रुटीमा राखिएको थुनछेकको प्रावधानले उद्यमीहरु हतोत्साही हुँदै गएका छन । आर्थिक अपराधको दण्ड सजाय आर्थिक नै हुन नसक्दा उद्यमीहरुले थप अपमान व्यहोर्नु परेको छ । कथंकदाचित सरकारी कार्यालयको त्रुटीको कारण उद्यमी फस्न गएमा समेत तोकिएको धरौटी रकम तिरेर मात्र न्यायका लागि गुहार लगाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था अन्यायपूर्ण रहेको छ ।
श्रम ऐन, २०७४ मा उल्लेखित उद्योग विरोधी तथा अव्यवहारिक प्रावधान लामो समयदेखि उद्यमीहरुले संशोधन हुनुपर्छ भन्दै आए पनि खासै सुनुवाई हुन सकेको छैन । त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा राम्रो भए पनि व्यवहारिक नभएकोले कोषमा आवद्ध हुन न उद्यमी न श्रमिक, न बैंकिङ्ग, न शैक्षिक क्षेत्र, न चिया बगान, न अनौपचारिक क्षेत्र नै इच्छुक देखिन्छन । कुनै पनि क्षेत्र यो व्यवस्थाप्रति खुशी छैनन् । यो विषय लादिनु भन्दा पनि सवै पक्षको हित हुने गरी लागु हुनुपर्छ भन्ने उद्यमीहरुको मागबाट सरकार भागी रहेको अवस्था छ ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको शाखा कार्यालय जिल्ला जिल्लामा विस्तार हुन नसक्दा उद्यमीहरु बेकारको दोहनमा पर्ने गरेका छन । कच्चा पदार्थभन्दा तयारी सामानमा बढी राजस्व लाग्ने व्यवस्था अझै लागु गर्न सकिएको छैन । खपत भन्दा बढी विद्युत आपूर्ति भईरहेको समयमा पुनः डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको नाममा प्रिमियम दरको महशुल अझै असुल न्यायोचित होइन । नियमपूर्वक राजश्व तिरी खातापाता दुरुस्त राखी कानूनबमोजिम पालना गर्नुपर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु पूरा गरी व्यवसाय गर्दा समेत राजस्व कार्यालय, प्रहरी र प्रशासनबाट अनावश्यक छापा मारी दुःख दिने कामले उद्यमीहरु सँधै त्रसित भई बस्नुपर्ने अवस्था अझै छ ।
नेपालका उद्यमी व्यवशायीहरुले भोगी रहेका यस्ता समस्याको फेहरिस्त लामो छ । समस्या समाधान गर्ने दायित्व भएका निकाय यसलाई स्वीकार गर्छन, तर समाधानमा तत्परता देखाउँदैनन । पहिचान भएका समस्या समाधानमा समेत यो प्रकारको उदासिनताले उद्यमीहरु निराश त छन नै स्वयं सरकारको महत्वाकांक्षी नारा “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” समेत पछाडि धकेलिँदै गएको छ ।
उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा कहावत मात्र होइन एउटा अनुभव पनि के हो भने यस क्षेत्रमा प्रवेशलाई जति सहज बनाइन्छ त्यति नै सहज बहिर्गमनमा पनि हुनुपर्छ । यसका लागि अनुगमन निकायको उद्देश्य नियन्त्रणात्मक र राजस्वमुखी मात्र नभई प्रक्रियागत तहमा सरल र व्यवसाय मैत्री पनि हुनुपर्दछ ।
कोरोना भाइरसबाट 'स्टार वार्स' को प्रख्यात अभिनेता एन्ड्र्यु ज्याकको निधन
भयावह बन्दै फ्रान्समा काेराेनाः एकैदिन १३ सय ५५ काे ज्यान गयाे
नेपाल बैंकबाट सातै प्रदेशको राहत कोषलाई पाँच–पाँच लाख सहयोग